Ukutshala imali kwingqalasizinda eluhlaza kuyisihluthulelo sokuzivumelanisa kangcono nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imvelo iyimpilo. Kodwa-ke, umuntu wanamuhla ubonakala ezama ukuyisusa ebalazweni, engazi ukuthi naye ungowakhe. Eqinisweni, kuyisiqephu esiyisisekelo sephazili esakha iplanethi yethu.
Kwesinye isikhathi kuthiwa yiGaia noma uMama Womhlaba ngabalandeli bezinkolelo ezintsha zemvelo, iqiniso ukuthi siphila ezweni eliya liphathwa kabi. Futhi, njengoba sazi, isenzo ngasinye sinokuphendula kwaso, kungekudala. Kepha noma kunjalo kukhona nendawo yokuzindla nokucwaninga, kulokhu, ngengqalasizinda eluhlaza.
Futhi yilokho kanye okwenziwa yi-Environmental Hydraulics Institute yase-University of Camtabria kanye ne-Biodiversity Foundation emapaki amathathu kazwelonke aseSpain: iPicos de Europa, iGuadarrama neSierra Nevada. Kulezi zindawo ezinhle khuthaza iphrojekthi efunda ukuthi ukwakheka kwengqalasizinda eluhlaza nokubuyiselwa kwehlathi okuvumela ukuzivumelanisa nezimo zezulu.
Enye yezinto abayenzayo ukuhlala phansi bakhulume nezimenenja zalawo mapaki ukuze ubafundise amamodeli futhi baklame ingqalasizinda eluhlaza efanelekile ngokuya ngesimo sendawo nezimo zezulu ezifanayo. Ngaphezu kwalokho, bazovakashela ngayinye yalezi zindawo kanye nabaphathi, abaqondisi kanye nochwepheshe ukuze babakhombise izinhlobo zenguquko ezimboze izimila kanye nokuguquka kwesimo sezulu, into ezoba wusizo olukhulu, ngokwesibonelo, ukubuyisela osebeni lwemifula noma emithambekeni, ukuthuthukisa izindawo ezithile zehlathi.
Ngakolunye uhlangothi, Uchungechunge lokulingiswa kwesimo sezulu luzokwenziwa ukuhlola umphumela wezinguquko esimweni sezulu ezizokwenzeka cishe ngonyaka ka-2050. Ngakho-ke, kuzokwazi ukwazi okuningi noma okuncane obekuzokwenzeka maphakathi nekhulu leminyaka uma namuhla kungenziwa lutho ukuvikela amahlathi, noma uma, kunalokho, kuthathwa izinyathelo ukuze zikwazi ukuzivumelanisa kangcono nokuguquka kwesimo sezulu.
Sekukonke, banethemba lokuthi izindawo eziluhlaza zaseSpain nezinhlobonhlobo zayo zezinto eziphilayo ezinhle kakhulu zingaqhubeka zikhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukutshala imali kwingqalasizinda eluhlaza kuyisihluthulelo sokuzivumelanisa kangcono nokuguquguquka kwesimo sezulu